DHAXAL SUGAHA SACUUDIGA OO LACAG UGU DEEQAY DADKA REER YEMEN EE UU CUDURKA DAACUUNKU SOO RITAY | Saxil News Network
DHAXAL SUGAHA SACUUDIGA OO LACAG UGU DEEQAY DADKA REER YEMEN EE UU CUDURKA DAACUUNKU SOO RITAY
June 27, 2017 - Written by cali abdilaahi
Dhaxal sugaha Boqorka dalka Sacuudi Arabia, ahna ra’isal wasaare ku xigeenka dalkaasi iyo waliba wasiirka gaasdhaan dhiga Mohammed bin Salman ayaa aduun lacageed oo gaadhaya $66.7 million oo dollar ugu deeqay hay’addaha WHO iyo UNICEF si loo xakameeyo xanuunka daacuunka oo ka dilaacay dalka Yemen.
Xanuunkan ayaa saamayn xoogan ku yeeshay dadka ay dagaaladu halakeeyeen ee Yemen, waxaana lagu soo waramayaa in ay u dhinteen dadkii ugu badnaa, sidoo kalena ay u jiifaan kuwo kale.
Hay’adda Caafimaadka aduunka ee WHO ayaa uga mahad celisay Boqor Maxamed Salmaan taakulada lacageed ee uu ugu deeqay dadka uu xanuunkaasi la soo dersay, waxaanay sheegeen in ay tahay taakulo wax badan ka tari karta dhibka ka jira dalka Yeman.
“Xafiiska WHO Ee Gobolka waxa uu si waafi ah ugu mahad celinayaa Boqor Maxamed Bin salmaan oo ah dhaxal sugaha boqorka, ahna raisal wasaare ku xigeenka iyo waliba wasiirka gaashaandhiga, kaalinta wax ku ool ah ee bani aadamnimada ee uu ku taageeray dhaqaalaha dadka uu soo ritay cudurka daacuunku, kaas oo ka dilaacay dalka yemen” sidaas waxa yidhi madaxa gobolka Mahmoud Fikri ee who.
Dalka yemen ayaa waxa dadkiisa la soo derisay laba laga ducaysto kuwaas oo kala ah cuduro iyo colaad, waxaana xulafo uu dalka sacuudigu hogaaminayaa ay weeraro ku hayaan dalkaasi, ka dib markii kooxaha shiicada ahi ay ka adkaadeen xukuumadii dalkaasi ka talinaysay.